Fampihavanana sadasada - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ratalata Jn Ba il y a 7 années
Gazetin’ny Fiangonana no itafatafana ary fitenin’ny fiaraha-monina no ifanakalozana. Tsy mifanipaka izany satria ao anatin’ny fiaraha-monina no misy ny Fiangonana fa tsy any ivelany akory. Ary ny fitenin’ny fiaraha-monina tsy ratsy lalandava akory. Tsy voatery ho fiteny akademisianina no mahalaza ny tian-kambara.
Manome vahana ny fahavalom-pirenena
Ny tian-kambara etoana dia mahakasika ity fampihavanana-fampihavanana ity. Efa hatry ny ela aho no tsy niombon-kevitra tamin’ny foto-kevitra nametrahana azy. “Ny fampihavanam-pirenena no fanoitra ho an’ny fampivoarana ny firenena” hoy ry zareo eo amin’ny FFM. Napetraka ho teny faneva izany. “Tsy mety izany” hoy aho nitafa tamin’izy ireo. “Tsy mety izany satria dia hanararaotra izany teny faneva izany ny fahavalom-pirenena” hoy aho. Ny fahavalom-pirenena no mahazo tombon-tsoa amin’ny tsy fahavitan’ny fampihavanam-pirenena. Na iza no hampihavanina no iza no hampihavanina. Na hampihavana an’i andry Rajoelina sy Ravalomanana isika na filoha hafa dia hametraka indrokely hatrany ny fahavalom-pirenena. Dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Dia ireo fahavalom-pirenena no mahazo laka. Iza ireo fahavalom-pirenena ireo ? Ireo manao ampihimamba ny fiharian-karena : Gasy, Sinoa, Karana sy ireo vahiny vaovao toy ny SiriLankey, ny hafa tsy ho ary ho voatanisa.
Ny toa hadinontsika Malagasy dia ny fisian’ity fanatontoloana ity. Mila touristes isika (mpizaha-tany) ? eny mila izany isika napetraka mihitsy aza ny fanamby fa hatratra million maromaro ny isan’ireo mpizahatany any amin’ny taona 2020. Nofinofy. Fa heverintsika fa hipetra-potsiny ve ny toeram-pizaha-tany hafa ? Rehefa tsy milamina ny eto amintsika dia lasa any an-kafa ireo mpizahatany novinavinaina ho avy eto… Tsy rediredy izany lazaiko izany. Zava-misy izany… Rehefa tsy mamokatra vary isika dia tsy maintsy manafatra, ary efa vonona ireo manana ny ampy hivarotra amintsika.
Dia izao isika hiroso amin’ny fampihavanana an’ireo mpifanandrina. Nifanandrina tamin’ny 2002 andaniny avy eo ireo mpifanandrina tamin’ny 2009 ankilany. Eo koa ireo nifanandrina taorian’ny 2009. Miitatra tahaka ny sima misioka izy ity. Ao ny fampanantenana fa honerana hono ny fahavoazana. Izaho izay manoratra izao dia isan’ny tra-pahavoazana tamin’ny 1991. Na ny taratasy manaporofo ny fisian’ny fananako aza potika tany. Na ny raiko nihary aza efa tsy eto antany intsony. Dia ahoana ? Moa tsy voa fanindroany ve aho ? Eny nitolona politika aho tamin’izany. Nifanandrina tamin’ireo andaniny ara-poto-kevitra kanefa dia herin-tsandry sy barofo no nasesy. Ankehitriny dia izao indray fa tsy ho tafiditra ho isan’ny hampihavanina izahay.
Iray amin’ireo fihetsika mitaky fampihavanana, ilay fampihavanana sadasada, ny an’ity kolonely iray “mitaky” ny fandohalihan’ireo olona vitsivitsy notoriany eny amin’ny fitsarana. Hadinony tanteraka fa noho ny asany no nisian’ny fanonganam-panjakana tena izy tamin’ny taona 2009. Niainga tamin’ny hevitra tsara angamba ry zareo tamin’izany fa ny vokatra dia lavitra ilay fanavotam-pirenena tian-katongavana. Fanabotriam-pirenena no misy ankehitriny. Ka raha mitaky izatsy fandohalihana izy moa ve efa nibaboka tamin’ny Firenena ? Tsy mbola nandre izany isika. Izay no mahasadasada ny fampihavanana voizin’ny tsirairay ary manome vahana ny fahavalom-pirenena, ireo tia tanindrazana koa vitsy loatra.
Santionany amin’ny hilazako ireo fa fampihavanana sadasada leiretsy ity ataontsika eto ity. Aoka tsy ny omaly lava no hitodihantsika fa ndao ny anio no atrehina ary ny ampitso tsaratsara kokoa no homanina. Ahoana ? Tsy aty amiko ny lakile fa raha taty amiko ny lakile dia efa novahako ny varavarana. Fa na tsy aty amiko aza ny lakile dia azoko lazaina fa diso varavarana ho vohaina isika ankehitriny. Ka na ho tontosaina io fampihavanam-pirenena ataon’ny FFKM io ary amin’ny daty voatondro na hahemotra dia diso lalana isika. Mahereza hatrany mitady ny vahaolana tena izy.